MALAKIA 1.1-14	F. 1 ,2 | Fitandremana Ankadifotsy
MALAKIA 1.1-14	F. 1 ,2
RATSY NY MANADINO
Ny fitavan’ Andriamanitra. Manambara ny fitavany manokana ny Israelita Andriamanitra tamin’ny nifiadiany azy (2b-3; Romana 9.6-16). Ny taranak’Israely na Jakoba no navahan’Andriamanitra tamin’ny firenena satria mpandova ny teny fikasana izay noraiketin’ny fanekem-pihavanana. Naverin’Andriamanitra tamin’ny Israely ihany koa ny fiiziany, ny tanindrazany, ny fanompoam-pivavahana rehefa nampodiny tamin’ny fahababoana izy ireo. Indrisy tsy tsapany izany (2).
Impiry tokoa moa isika kristiana no toa mametraka fanontaniana tahaka
Ireo voamabara ireo rehefa sendra ny sarotra?
Tsy mahatsapa ny fitiavan’Andriamanitra. Mampalahelo mihitsy ny fiainan’izy ireo rehefa tafaverina indray tany Jerosalema: adinony ny nandray ny andraikitra rehetra tokony natao. Variana tamin’ny fiainany manokana ka tsy nahatsiaro ny fitondran’ny Tompo, Ilay Mpanjaka Lehibe (14.b). Tsy tsapan’izy ireo fa ny famaizana nanjo azy ireo dia fomba fampahatsiarovan’ny Tompo ny fitiavany ihany koa (Ohabolana 3.12). Ilay fomba fitondrana, fitaizana, ilay pedagojian’ny Tompo no tsy azon’ny Isiraely. Mba manao ahoana ihany koa re isika kristiana mpiray lova amin’i Kristy?
Fanompoam-pivavahana tsy mendrika ny Tompo. “Raha Ray aho aiza izay hajako? Raha Tompo aho, aiza izay tahotra Ahy?”(6) Tsy nanome voninahitra ny Tompo izy ireo sady nanamavo ny Anarany tamin’ny fahasahiana nanolotra fanatitra ratsy, misy kilema, nangalarina teo amin’ny alitarany. Sakafo tsy zarizary no nandotoana ny alitaran’i Jehovah. Ny mpanapaka no natahoran’izy ireo sy najainy mihoatra noho ny Tompon’izao rehetra izao. Soa fa fitiavana Andriamanitra ka nandefa an’i Malakia hiantso ny mpisorona mba hahatsiaro tena sy hifona eo anatrehan’ny Tompo (9).
Tsarovy fa ankasitrahan’ny Tompo sy mampifaly Azy ny fanatitra tena vokatry ny fo feno fitiavana sy fanajana Azy.